मानिसलाई के कारणले कोलेस्टेरोल बढ्ने गर्छ ? बढेको कसरी थाहाँ पाउने ? ज्ञान मूलक कुराहरु सेयर गरी सबैलाई जानकारी दिलाऔ - E ALL NEPAL
मानिसलाई के कारणले कोलेस्टेरोल बढ्ने गर्छ ? बढेको कसरी थाहाँ पाउने ? ज्ञान मूलक कुराहरु सेयर गरी सबैलाई जानकारी दिलाऔ
हाई ब्लड कोलेस्टेरोल एउटा यस्तो समस्या हो जुन विश्वमै एक गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यसलाई सब भन्दा छिटो फैलिने बिमारीको रुपमा लिइन्छ । किन कि कोलेस्टेरोलको बारेमा मानिसहरुलाई त्यति राम्रो ज्ञान हुँदैन । त्यसकारण हामी कोलेस्टेरोलको लक्षण देखे पनि नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ । आज हामी आखिर के कारणले कोलेस्टेरोल बढ्छ र कोलेस्टेरोल बढेको कसरी थाहा पाउने ? भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ ।
जुन चीजहरुमा LDL (Low Density Lipoprotein) को मात्रा अधिक हुन्छ, त्यस्ता खानेकुराको सेवन गर्नाले शरीरमा नराम्रो कोलेस्टेरोल बढ्न थाल्छ। सब भन्दा बढी LDL फ्राई गरेको चिज र नन भेज परिकारमा हुन्छ। यसैगरी मैदा, घ्यु, बटर, केक, पेस्ट्री, डाल्डा, मिठाई, तारेको खानेकुरा, चुरोट र रक्सी जस्ता पदार्थ सेवन गर्नाले शरीरमा कोलेस्टेरोल छिटो बढ्छ। बढेको कोलेस्टेरोल शरीरमा रगत आदान प्रदान गर्ने नसामा जम्मा भएर बस्छ । जसले समयको साथ साथ नसामा प्रेसर हुनुका साथै जाम हुन थाल्छ।
सबभन्दा बढी कोलेस्टेरोल दिलमा रगत पुर्याउने कोरेनरी अर्टेरिज र दिमागको केरोटिड अर्टेरिजमा जम्मा हुन्छ जसको कारण अचानक हृदयघात वा ब्रेक स्ट्रोकको खतरा हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा मानिस देख्दा स्वस्थ देखे पनि नराम्रो कोलेस्टेरोल बढ्नुका कारण हृदयघात जस्ता खतराको चपेटामा पर्न सक्छ। कोलेस्टेरोल बढ्नुको मुख्य दुई कारणहरु छन्, एक हाम्रो जीवनशैली र दोस्रो हामीले खानेकुरा ।
जानी राखौँ यस्ता लक्षणहरु जसले कोलेस्टेरोल बढेको र मुटु सम्बन्धि बिमारी भएको संकेत दिन्छ। यी लक्षणहरुलाई विल्कुलै नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । समयमै सचेत भएर सावधान अपनाउन जरुरी छ, विस्तृतमा
१. हात खुट्टा नचल्नु वा लाटो हुनु: नराम्रो कोलेस्टेरोल बढ्दा हाम्रो शरीरमा रगत पुर्याउने अर्टेरिज संकुचित हुन्छ जसको कारण शरीरमा रक्त प्रवाह कम हुन थाल्छ। खासगरी खुट्टामा । यस्तोमा हात वा खुट्टा बारबार नचल्ने, खुट्टा एठान, बस्दा वा राती सुत्ने समय नसा चढ्ने वा फुल्लिने, प्राय खुट्टा झमझम हुने वा काँटाले घोचेको जस्तो हुने महसुस हुन्छ । साथै यदि तपाइँको हात खुट्टा बेला बेला चिसो हुन्छ भने कोलेस्टेरोल बढेको कारण यस्तो हुन सक्छ ।
२. एकदम धेरै थकान वा कमजोरी महसुस हुनु: कोलेस्टेरोल बढ्दा हाम्रो शरीरले खानाको पोषकतत्वलाई पुरै ग्रहण गर्न सकिदैन । जसको कारण विस्तारै शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमी हुन थाल्छ । यस्तोमा बढी थकाई लाग्ने, धेरै पसिना आउने जस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
३. तौल बढ्नु: यदि शरीरमा (HDL) राम्रो कोलेस्टेरोलको मात्रा बढी छ भने यसले चर्पीलाई बढ्न बाट रोक्छ र बोसोलाई पनि पगाल्छ । तर नराम्रो अर्थात् LDL कोलेस्टेरोल बढ्यो भने शरीरको वजन एकदम छिटो बढ्छ। यसकारण मोटो व्यक्तिहरुको शरीरमा कोलेस्टेरोलको मात्रा बढी हुन्छ र यस्ता व्यक्तिहरुलाई मुटु वा दिमागको बिमारी हुने खतरा पनि धेरै नै हुन्छ ।
४. छाँती दुख्नु: अर्टेरिजमा जम्मा भएको फ्यटी सब्सट्यान्स रगतको प्रवाहमा रोकवत पैदा गर्छ । जसको कारण समय समयमा छाँतीको वरिपरी दुख्ने, भारीपन वा भित्रबाट खाएको जस्तो महसुस हुन्छ ।
५. टाउको दुख्नु वा रिंगटा लाग्नु : कोलेस्टेरोल बढ्दा दिलको साथ साथ दिमागमा रगत पुर्याउने अर्टेरिसमा पनि असर पार्छ। जसको कारण टाउकोको पछाडी भाग र आधा टाउको अचानक दुख्न सुरु हुन्छ । कहिले कहिँ डर लाग्ने वा चक्कर आउने समस्या पनि हुन्छ ।
६. सास फुल्नु वा धेरै पसिना आउनु: शरीरमा कोलेस्टेरोल बढ्नले मुटु वा शरीरमा रगतको संचारलाई कमजोर बनाइदिन्छ । यस्तोमा थोरै काम गर्दा पनि धेरै थाक्ने, पसिना आउने वा सास फुल्ने जस्ता समस्या देखा पर्छन् ।
७. खाना नपच्नु वा ग्यास्ट्रिक बढ्नु: बढेको LDL ले हाम्रो शरीरको पाचन प्रक्रियामा ठुलो असर पार्छ । कलेजोमा कोलेस्टेरोल बढेको कारण मेटाबोलीजम कमजोर हुन थाल्छ । यसकारण पेट फुल्ने, खाना नपच्ने, पेटमा ग्याँस बन्ने या कब्जियत जस्ता समस्या हुन्छ ।
८. आँखाको वरिपरी दाना आउनु: जब शरीरमा LDL को मात्रा बढ्छ तब आँखाको वरिपरी हल्का पहेंलो दाना जस्ता देखा पर्न थाल्छ । सुरुवातमा यी दाना साना हुन्छन् तर विस्तारै बढेर ठुलो बन्छ । यदि समयमै ध्यान दिएन भने विस्तारै ठुलो हुँदै जान्छ र दुख्न पनि सुरु हुन्छ ।
सुगरका बिरामीका लागि खुसीको खवरः अव आयुरबेधिक बिधीबाट हाम्रै घरछेउमा पाईने आँकको मात्र दुई पातले हटाउँछ जरैदेखि सुगर तर कसरी ? जानकारी लिनुहोस
सरकारकै उपप्रधानमन्त्री यादवले भन्दै छन आफ्नो जीवनकालमै छिमेकी राष्ट्रबाट नेपालमा रेल गुड्न सम्भव छैन